कोप २६ सम्मेलनमा किन अनुपस्थित भए चीन र रसियाका राष्ट्रपति ? « Khabarhub
कोप २६ सम्मेलनमा किन अनुपस्थित भए चीन र रसियाका राष्ट्रपति ?
काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप-२६ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन अनुपस्थित भएपछि उनीहरुको चर्को आलोचना भएको छ ।
सम्मेलनमा विभिन्न देशले जलवायु परिवर्तनका असर न्यून पार्न विभिन्न प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिरहेका बेला विश्वकै औद्योगिक राष्ट्रमध्येको एक चीन र अर्को शक्तिशाली देश रसियाका राष्ट्रप्रमुख अनुपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा १४ नोभेम्बरसम्म चल्ने सम्मेलनमा दुवै देशले आफ्ना प्रतिनिधि भने पठाएका छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन र त्यसपछि अमेरिका पर्छ । त्यस्तै युरोपेली युनियन, भारत र रसिया क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौ स्थानमा पर्छ ।
बाइडनले रसियाको जंगल डढेलोले सखाप हुँदा पुटिन टुलुटुलु हरेर बसेको र वन संरक्षणका मुद्दामा मौन बसेको आरोप लगाए ।
वन जंगल संरक्षण गर्ने सवालमा चीन र रसिया दुबै एकमत छन् । सन् २०३० सम्ममा वन फडानी समाप्त गर्ने प्रतिबद्धतामा रसिया र चीन दुबैले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ट्रम्पको निर्णयपछि सम्झौताको भविष्यका बारेमा विभिन्न आशंका उब्जिएका थिए ।
प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७८, बुधबार ११ : २६ बजे